Dayuurado Dagaal Oo Caawa Duqeeyey Degaanada ay Maamulaan Al-shabaab Ee Gobolka Gedo. – Heemaal News Network
Dayuurado dagaal oo aan la garaneynin cida iska leh ayaa caawa duqeymo culus ka fuliyey degaan ay gacanta ku heyso kooxda Al-shabaab oo ka tirsan gobolka Gedo.
Masuuliyiin gobolkaas ka tirsan ayaa sheegaya in duqeynta ay ka dhacday degaanka Dhiigtaar oo u dhow tuulo Barwaaqo.
Dadku dhow degaanka la duqeeyey ayaa sheegay iney maqleen guuxa dayuurado dagaal iyo madaafiic darandoori ah oo sida biriqda u dhacayey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in duqeynta lal beegsaday saldhig ciidan oo Al-shabaab ay ku leeyihiin degaanka la duqeeyey.
Wax faahfaahin ah lagama hayo illaa hadda khasaaraha nafeed ee ka dhashay duqeyntan xili oo habeen ah iyo isgaarsiinta degaanadaas oo liidata awgeed.
Alshabaab Oo Weerar Ku Qaaday Xalay Saqdii Dhexe Saldhig Ciidamada Badda Puntland Ku Leeyihiin Duleedka Boosaaso
Alshabaab ayaa xalay saqdii dhexe weerar ku qaaday saldhiga ciidamada badda ee maamulka Puntland ku leeyihiin dagaanka Balli khadar oo u dhexeeya buuraha Galgala iyo magaalada Boosaaso. Ilaa hadda ma jiro war la hubbo oo […]